Thola isivuno njalo eliphezulu pepper emhlabathini evulekile Russian izimo sezulu - komsebenzi nzima. Lokhu thermophilic uthanda umswakama, ukukhanya nendawo enkudlwana. Ngakho-ke, indlela ephumelela kakhulu is ukutshala pepper endaweni abamba ukushisa. Lesi isilinganiso lula kakhulu yesondlo, ivumela ukuba silondoloze lokushisa oyifunayo kanye nomswakama.
Isigaba sokuqala - kukhethwa indawo zokutshala
Kukhethwa indawo umkhiqizo kuncike kakhulu: singakutholi ukukhanya kwelanga, nenhlabathi esindayo, ukusondela komhlaba zibulale sokuvuna esizayo. Abalimi Novice ngaphambi ukukhula pepper e greenhouse, kubalulekile ukuhlola indawo futhi ukhethe indawo libalele noma kancane ukubopha for the abamba ukushisa. Kukhethwa indaba for greenhouse Ungase futhi sinendima ebalulekile. Ucwaningo lwathola ukuthi izingane pepper is best ngaphansi ifilimu. Ngaphezu kwalokho, nangohlobo lwezinto izithelo isikhule ngaphansi ifilimu blue and red iphakeme kakhulu kunanoma ngaphansi esobala ezivamile noma amhlophe.
Ungakhohlwa mayelana nokulungiselela kwenhlabathi. avundiswa wakhe umquba organic: umquba, humus noma umquba. Intuthuko kukamanyolo amaminerali akhiqizwa kwentwasahlobo.
Ngaphambi indlela yokutshala pepper e abamba ukushisa, kumelwe ukhethe ngokucophelela sha. Ngokukhethekile izinhlobo ezifuywa kanye nzalo kuzosiza sikhule amakhophi eliphezulu, ngisho ezindaweni ezisenyakatho. Kulokhu indlela yisithombo, futhi isikhathi sokutshala ekuseni kakhulu: Januwari - Februwari. Esikhathini indawo phakathi kuthiwa izithombo esekhulile, kusukela Februwari - Mashi.
I izitsha noma zokugcina efudumele inoculated imbewu kumuntu ka 1 cm ukujula 1.5 cm umbandela -. Amanzi Good nomhlabathi okunomsoco. Waterlogging, kanye nokuntuleka umswakama, abantwana azamukeleki ngoba runaways abasha. Amazinga baqhubeka ukuba 25-27 degrees, ngemva ukuhluma ke lancipha degrees 18 iviki elilodwa, bese uphinda kushintshwe degrees 28 ntambama ngezinsuku libalele. Uma liguqubele izinga lokushisa Ungabeka degrees 20 kuya ku-23.
Ngaphambi indlela yokutshala pepper e greenhouse endaweni elungisiwe, kudingeka alungiselele izithombo, oyothatha 50 70 izinsuku. Phakathi nale nkathi, izitshalo ezisencane badinga ukuthambisa obuningi futhi ukuvundiswa. Ukufakelwa endaweni unomphela ezenziwe lapho usongo kwentwasahlobo frost isidlulile. Ukuze pepper eyaqala futhi fruited, izitshalo zitshalwa at ibanga 15-25 cm phakathi lamagquma shiya 30-40 cm. Ukuze ukufakelwa ukuba greenhouse efanelekayo eqinile zezinhlobo enempilo namahlamvu uqweqwe ifomu efihlekile.
Budebuduze kwamanye amasiko
Kulabo balimi abafuna ukwazi ukuthi sikhule pepper e abamba ukushisa, umbuzo usalokhu uwukuthi: kungenzeka ukuhlanganisa kubo nezinye izitshalo? indlela Professional kuhilela ezikhulayo ngaphandle endaweni utamatisi kanye ukhukhamba. Kodwa ukuntula isikhala ebangela abanye abalimi ehlanganiswe ukhukhamba nopelepele kule abamba ukushisa. Kulokhu, asinakulindela isivuno eliphezulu ngoba izimo ezikhulayo lezi amasiko ahlukile. Ngaphezu kwalokho, ikhukhamba isiswebhu luthathe wonke indawo ekhona kule abamba ukushisa, ngakho yaba namandla okususa ukukhanya, ngaphandle kwalokho pepper ngeke bakwazi ukuthela izithelo. Komakhelwane nenzuzo kakhulu - utamatisi nopelepele. Lezi izitshalo hlala amazinga ezahlukene utamatisi abamba ukushisa - phezulu, pepper - ephansi. Ngemuva ukusika amahlamvu engezansi utamatisi bekhululiwe sonke isikhala aphansi, kanye pepper uzizwe ukahle leyo nsimu efanayo utamatisi.
Ezimbizeni Chrysanthemum: ukunakekelwa futhi ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Begonia - izinhlobo zezikhungo zokunakekela
Anemone Buttercup (lyutichnaya): incazelo, izithombe, betshala nokunakekela
Beautiful ezithakazelisayo ahlekisayo Indian
Khulisa imvukuzane: indlela kuyingozi futhi yini okufanele uyenze?
Slate imidwebo. Kanjani futhi yini ukupenda kahle slate?
Njengoba zokudlela ophoqelelwe amakhasimende ukuba sizinake ngaphezu: 6 izindlela ukudonsa imali ngawe
Spider black umfelokazi - ezweni nomzingeli isinambuzane